Inona ny bibikely matimaty eto an-tany?
Biby sy natiora Bibikely
Na dia tsy manisy ratsy antsika aza ny ankamaroan'ny bibikely, ary raha ny marina, mametraka ny fiainantsika tsaratsara kokoa, misy bibikely vitsy izay afaka mamono antsika. Iza no bibikely matanjaka indrindra eto an-tany?
Mety mieritreritra ny tantaran'ny mpamono olona ianao na angamba ny antsasaky ny Afrikana na ny anjomara Japoney. Na dia bibikely mampidi-doza aza izany rehetra izany, ny maty dia tsy misy afa-tsy ny moka. Ny moka irery ihany dia tsy afaka manisy fahasimbana be antsika, fa toy ny aretina mpirenireny, ireny bibikely ireny dia maharikoriko.
Ireo mekariana malaria dia miteraka mihoatra ny 1 tapitrisa ny fahafatesana isan-taona
Ireo moka miafina Anopheles dia mitondra parasite amin'ny karazana Plasmodium , ny antony mahatonga ny tazomoka mahatsiravina. Izany no mahatonga io karazana io ho fantatra amin'ny hoe "moka malaria" na dia mety hihaino azy ireo aza ianao hoe ny "moka marefo."
Ny parasite dia mamerina ao anatin'ny vatan'ny moka. Rehefa manaikitra ny olona ny moka ny moka, dia alefa any amin'ny mpanentana ny olona ny parasite.
Amin'ny maha-vazaha ny tazomoka, ny moka dia miteraka indraindray ny fahafatesan'ny olona iray tapitrisa isan-taona. Araka ny voalazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, dia eo amin'ny 212 tapitrisa ny olona voan'ny aretina manelingelina amin'ny taona 2015. Ny antsasaky ny mponina eran-tany dia iharan-doza ho an'ny tazomoka, indrindra any Afrika izay ahitana 90 isan-jaton'ny tranganà tazomoka eto amin'izao tontolo izao.
Ny zaza latsaky ny dimy taona dia tena atahorana. Efa ho 303.000 ny isan'ny ankizy maty noho ny tazomoka tamin'ny taona 2015.
Izany dia zaza iray isa-minitra, fanatsarana iray isaky ny 30 segondra amin'ny 2008.
Saingy, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny tranganà tranganà aretina dia nolavina noho ny fomba fitsaboana maromaro. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana bibikely amin'ny bibikely moka sy toeram-ponenana ao amin'ny faritra izay tena voan'ny tazomoka. Nisy koa ny fiakaran'ny marary artemisinine (ACTs), izay tena mahomby amin'ny fitsaboana ny tazomoka.
Mosquitoes izay mitondra aretina hafa
Zika dia lasa atahorana haingana indrindra amin'ireo aretina nateraky ny moka. Na dia tsy dia fahita firy aza ireo olona voan'ny otrikaretina Zika sy matetika vokatry ny fahasarotana hafa, dia mahaliana fa ny karazana moka hafa dia tompon'andraikitra amin'ny fitondrana azy.
Ny moka Aedes aegypti sy moka Aedes albopictus dia ireo mitondra ity virosy ity. Izy ireo dia mpiompy hafahafa isan'andro, izay mety ho antony nahatonga ny olona maro ho voan'ny aretina haingana be rehefa nipoitra be tany Amerika Atsimo tamin'ny 2014 sy 2015 ny fipoahana.
Na dia malaza amin'ny karazana moka aza ny tazomoka sy ny Zika, dia tsy toy izany ny aretina hafa. Ohatra, ny Foibe momba ny Fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina (CDC) dia namaritra karazam-borona maherin'ny 60 izay afaka mampita ny virosy West Nil. Manamarika ihany koa ny fikambanana fa ny karazana Aedes sy Haemogugus dia tompon'andraikitra amin'ny trangam-pahaizana mavo rehetra.
Raha fintinina, ny moka dia tsy bibikely fotsiny fa miteraka lolo mena eo amin'ny hoditrao. Manana ny mety hiteraka aretina mafy izy ireo izay mety hitarika fahafatesana, ka mahatonga azy ireo ny bibikely mety maty indrindra eran'izao tontolo izao.
Ahoana no hamantarana ny dragona dragona?
Kitapo mivalona sy voankazo, Order Phasmida
Scorpionflies and Hangingflies, Mandidy Mecoptera
Ahoana no hifehezana ny lalitra ao an-tokantrano sy eo an-tokotany?
Karazana fôsily amin'ny bibikely
Nahoana no sarotra be ny manafina baomba?
Hihaona amin'ireo Bed Bugs
Lisitry ny bibikely 50 amerikana
Ny Ady Lehibe II: Battle of the Coral Sea
Ny Filankevitry ny Mpanjaka Monarch dia mamadika lalàna ho lalàna ao Canada
Inona ny vola miditra amin'ny diplaoma?
Inona no atao hoe bisikileta?
FAMU, Florida A & M University GPA, SAT sy ACT Data
Benjamin "Pap" Singleton: Mpitarika ny Exodusters
Hira Faneva populaire alemana
Fampidirana amin'ny zava-mahagaga
Torohevitra momba ny fikarakarana ireo mpianatra sarotra
Manaova fanirian-dratsy ve?
Ny dingan'ny fanolorana
Aristarko avy any Samos: Filozofa efa taloha misy hevitra maoderina
A Dinosaur ABC ho an'ny zaza kamboty
Zavatra mahagaga dimy momba ny Bodisma
Ady Mangatsiaka: B-52 Stratofortress
Ny Fiarahamonina Great Lyndon Johnson
Ahoana ny fividianana Corvette amin'ny 7 Easy Steps
Mizzou - University of Missouri, Columbia Admissions
Ao Arabo ve ny Kiobàna Cigars?
Nahoana ny tongotra na ny tongotr'ireo mpitaingin-tsoavaly no manimba?
Ny lalana mety hodiavina Baiboly taloha